मेसीले बनाए अर्को नयाँ कीर्तिमान ! - Everest Dainik - News from Nepal
मेसीले बनाए अर्को नयाँ कीर्तिमान !
एजेन्सी । स्टार फुटबलर तथा बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीले कीर्तिमानमाथि अर्को कीर्तिमान थपेका छन्। स्पेनीस ला लिगाको इतिहासमा उनले एक नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्।
मेसी ला लिगा इतिहासमा सबैभन्दा बढी १५० असिस्ट गर्ने पहिलो खेलाडी बन्दै नयाँ रेकर्ड बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यो सँगै मेसीले आफ्नो कीर्तिमानीको लामो सूचिमा अर्को नयाँ कीर्तिमान थपेका हुन्।
बार्सिलोनाले आइतबार नवप्रवेशी हुएस्कालाई ८-२ को फराकिलो अन्तरले हराउँदा मेसीले दुई गोलसहित दुई असिस्ट गरेका थिए। हाल युरोपियन लिगमै सर्वाधिक असिष्ट गरेका मेसीपछि १४३ असिस्ट गरेका केश फाब्रेगास १४३, मेसुट ओजिल १२८, रोनाल्डो १२२ र डानी आल्भेस ११० शीर्ष पाँचमा छन्।
याे पनि पढ्नुस मेसीको जर्सी र तस्वीर जलाउन आग्रह गर्दा एक वर्ष प्रतिवन्ध !
ट्याग्स: Footbller messi, messi